Maxaan U Necbahay Xisaabaadka La Xaqiijiyay | Martech Zone
Sababta aan u Necbahay Xisaabaadka la Xaqiijiyay
Saaxiib wanaagsan, Jason Falls, wuxuu lahaa cusbooneysiin cusub oo Facebook ah oo ku saabsan lambastar qof kasta oo ka tirsan warbaahinta bulshada oo ka diiwaangashan Facebook koontada la xaqiijiyay. Cusbooneysiintiisa ayaan amaan u aheyn shaqada, laakiin waxay ku abuurtay jahwareer awoodaha warbaahinta bulshada-in-noqon. Muddadiisii ​​dadka waawayn ee saxeexay waxay ku bilaabmeen "d" waxayna ku dhammaatay "boorso", hehe.
A koontada la xaqiijiyay waxaa lagu muujiyaa calaamadda jeegaanta cagaaran ama buluuga ah ee muuqata ee astaanta qofka ee Twitterka ama Facebook. Xaqiijiyay oo macnaheedu yahay Twitter ama Facebook ayaa waqti qaatay si loo hubiyo in qofka ka dambeeya koontada uu yahay qofka aad u maleyneyso inay yihiin. Dusha sare, waxay u egtahay fikrad weyn great ma dooneyno in dadka la khiyaaneeyo.
WAAN NECBAHAY koontooyinka la xaqiijiyay sababo dhowr ah awgood:
Qof kastaa ma codsan karo - sida Scott Monty dhig, 1% waxay marin u helaan koonto la xaqiijiyay. Maxaa qof walba u diiday? Markii aan ku xaqiijiyey meheraddayda Google+, waxaan awooday inaan si dhakhso leh u sameeyo oo aan dhib lahayn. Waxay ahayd oo u furan tahay qof walba.
Waxay ka dhigan tahay more - wax walba waa muuqaal ku jira shabakadda. Haddii ay tahay bar cagaaran oo loogu talagalay degel aamin ah, a taageere sare ama kuwa raacsan, bogga wikipedia, ama calaamadda ka socota bogga caymiska, tilmaame kasta oo saameyn iyo kalsooni ku leh shabakadda arrimaha oo waxay saamayn ku yeelataa dhaqanka dadyowga khadka tooska ah.
Sababtoo ah waxaa jira waxyaabo badan oo aan lahayn koontooyinka la xaqiijiyay, dimuqraadiyeynta ayaa kursi dambe leh. Hadda dadka qaarkiis waxay dardargelin doonaan koritaankooda - maahan qiimaha ay siiyaan shabakaddooda - laakiin sababtoo ah waxay leeyihiin calaamadda jeegga cagaaran ama buluugga ah. Calaamaddaas calaamaddu waxay sheegaysaa “Waan ka sii muhiimsan ahay qof kasta oo kale” natiijadeeduna waxay dardargelin doontaa taageerayaasha iyo raacitaanka.
Hadaadan i rumaysanayn, ma fahmaysid egos-ka meheraddan ka jira. Dadku waxay ku mashquulsan yihiin sidii ay u heli lahaayeen koontooyinkan la xaqiijiyey with xitaa iyadoo aysan jirin wax muujinaya in qofna si aan habboonayn u adeegsanayo aqoonsigiisa. Waxay u xuub siqayaan sidii ay u heli lahaayeen maxaa yeelay waxay ogyihiin in calaamadda cagaaran ama buluugga ahi ay tahay dahab. Waxay u horseedi doontaa raacitaan ballaaran, fursado badan oo hadal iyo qoraal, iyo - ugu dambeyn - ganacsi badan. Maaha mudnaan shaqsiyeed, laakiin calaamadda muuqata awgeed.
U fur nidaamka xaqiijinta qof kasta oo doonaya. Sida aan u codsaneyno shahaadooyinka SSL ama ganacsiga Google+, dhig hanaan meel qof walba uu fursad u leeyahay inuu ku xaqiijiyo aqoonsigiisa. U samee qof walba, ama ha sameynin gabi ahaanba.
Jun 3, 2013 saacadu markay ahayd 10:42 AM
Waad ku mahadsantahay inaad dhahdo wixii aan dhamaanteen ka fikiraynay muddo dheer hadda!
Jun 4, 2013 saacadu markay ahayd 11:48 AM
xisaabaadka la heli karaa waxay kicin doonaan nabadgelyo buuxda oo aan ammaan ahayn. Waan necbahay sidaas